Qualcomm inovhenekera iyo Snapdragon 690, yepakati-pevhu chip kuunza 5G kune masasi
Qualcomm iri pane roll mune yepazasi yepakati-rakasiyana chigadzirwa chigadzirwa chemakore ekupedzisira emakore. Iyo US-based chipmaker yakaona akawanda akakosha dhizaini kubva kuChina-based smartphone vatengesi vakaita seXiaomi uye Realme. Muna Gumiguru 2018, yakatangisa iyo Snapdragon 675 nhare mbozha, iyo yakateverwa nekuvhurwa kweiyo Snapdragon 730 / G muna Kubvumbi 2019. Aya mabhenefiti maviri, ayo akapinda munzira dzakabudirira dzemukati-kati smartphones, akateverwa nekutanga kweiyo Snapdragon 720G munaJanuary 2020. Chinhu chimwe chete icho vatatu vese ivava maCoC vakafanana ndechekuti ivo vaive vasina 5G yekubatana. Qualcomm yakaunza yakasanganiswa 5G kune Snapdragon 7-mutsara nekutanga kweiyo Snapdragon 765 / G munaDecember, asi iyo Snapdragon 765 (pamwe neyekuwedzera kwayo yakawedzera, iyo Snapdragon 768G) Yakagadzirirwa iyo yepamusoro-yepakati dhigirii smartphone musika. Izvi zvakasiya gomba rechikamu chepakati chepakati-chikamu. Zvino, Qualcomm yakazopedzisira yabvisa iyo gadhi nekuzivisa Snapdragon 690, yekutanga 5G-inogonesa nharembozha muSnapdragon 6-mfululizo.
Iyo Snapdragon 690 (SM6350) yakagadzirirwa kuve mutsivi weiyo Snapdragon 675, uye inoregedza inotsvedza mukati pazasi Snapdragon 720G uye Snapdragon 730G. Mukuita, zvakadaro, inoratidza hunyowani huwandu hweCPU uye GPU maumbirwo kupfuura iwo maviri 4G Snapdragon 7-mfululizo. Izvi zvinobva zvaita kuti Qualcomm ive yakasimba kwazvo SoC ichiri yepazasi yepakati-mhando chikamu. Izvi zvinoita kunge chip iyo pakupedzisira chinounza 5G kune mashese evatengi e-smartphone.
Qualcomm Snapdragon 690 - Zvimiro
Ngatiendei takadzika-neizvo zvikamu zveSoC:
CPU uye Memory: Kryo 560 (ARM Cortex-A77)
Iyo Snapdragon 690 ndeye octa-core CPU, ine 2 + 6 CPU musimboti yekugadziriswa. Iyo miviri mikuru macores ndeye Kryo 560 cores, yakavharwa kusvika ku2.0GHGHz, nepo iyo yasara madiki matanhatu cores ndeye ARM Cortex-A55 cores, sezvakaita yapfuura SoCs. The Kryo 560 cores is stock ARM Cortex-A77 cores (Qualcomm achiri kushandisa iyo "Yakavakirwa Cortex" rezinesi, asi zvakasiyana neiyo Cortex-A76, haisi kukumbira ARM kuti iite shanduko kuCortex-A77 cores). Sezvo iyo Snapdragon 675 yakaratidza A76-based Kryo 460 cores, iyo A77 cores iri Snapdragon 690 inounza kuyerwa kuita kwakasimudza. Qualcomm inotaura kuti kushanda kweCPU kunosvika pamakumi maviri muzana, iyo inowirirana nekutengesa kweArM maererano neCortex-A20. Nekuremekedza kuenzanisa kunopesana ne Snapdragon 77G uye Snapdragon 720G, zvinonyanya kuomarara sezvo yavo A730-based Kryo 76 cores yakavharwa kumusoro ku460GHz. Iyo Snapdragon 2.3, saka, pamwe ichasunga zvinopesana neCPU yekuita Snapdragon 690 mfululizo panzvimbo yekurova yakakwira.
Qualcomm ichiri kushandisa chete maviri makuru cores, akasiyana neMediaTek's Dimensity 800 uye Dimensity 820 SoCs inoratidzira ina hombe cores albeit wekare weCortex-A76 zvivakwa. Qualcomm haizove nemucheto maererano neyechete-yakavezwa CPU mashandiro ingave iyo Dimensity 820's A76 cores yakavharwa zvakanyanya pa2.6GHz, uye yakaderera wachi yekumhanya ichazeya iyo A77's IPC kuvandudza. Qualcomm iri kutarisana nemakwikwi akasimba kubva kuMediaTek gore rino.
Iyo Snapdragon 690 inogadzirwa pane Samsung's 8nm LPP maitiro. Density-smart, izvi zvinoreva kuti inotarisana nekusagadzikana kana ichienzaniswa neDimensity 800 uye Dimensity 820 SoCs, izvo zviri zviviri zvakagadzirwa pane TSMC yepamusoro 7nm FinFET maitiro. (Iyo Snapdragon 675, kune rumwe rutivi, yakagadzirwa pane Samsung's 11nm LPP process.)
Panyaya yekuyeuka, iyo Snapdragon 690 inoita 2 x 16-bit LPDDR4X ndangariro kusvika kuna 1866MHz, ine huwandu hwakakwira kusvika 8GB RAM.
Qualcomm Snapdragon 690 inoratidzira iyo Adreno 619L GPU, iyo inonzi Qualcomm inoti inoita kuti ive 60% nekukurumidza kupfuura iyo GPU mukutangira kwayo, iyo Snapdragon 675. Izvo zvingaite kunge nhamba inokatyamadza, asi kutaridzika kuri kunyengera se Snapdragon 675's Adreno 612 GPU yakanga isingachinjiki kubva ku Snapdragon 660's Adreno 512 GPU, iyo yakavhurwa nzira yose kudzoka muna Chivabvu 2017. Zvisinei, iyo Adreno nhamba yekunyorwa mazita inoratidza kuti GPU iri nekukurumidza kupfuura iyo Adreno 618 GPU ye Snapdragon 720G uye Snapdragon 730G. Ichakwanisa here kurova iyo Dimensity 820's Mali-G57MC6 GPU? Pamwe kwete. Iyo Adreno 619L inoratidza kutsigira kweVulkan 1.1 API uye Physical based Rendering (PBR).
AI: 5th Generation AI Injini ine Hexagon Tensor Accelerator
Iyo Snapdragon 690 inoratidza Qualcomm's 5th Generation AI Injini. Izvi zvine CPU, iyo GPU, iyo Hexagon 692 DSP, uye Qualcomm Sensing Hub. Kekutanga mune iyo Snapdragon 6-series, Qualcomm yakaunza yayo Hexagon Tensor Accelerator (HTA). Izvi zvinonzi kune simba rakapusa pane-chishandiso zviitiko mukuchengetedza, izwi, uye kamera, kusanganisira yemagariro mafirita mafilita uye kusimudzira kushandurwa pakati pamalenzi. Hexagon Scalar Accelerator uye Hexagon Vector Extensions varipowo, sezvingatarisirwa. Iko kushanda kweAI mu chip kwakawedzera neinopfuura makumi manomwe muzana kana ichienzaniswa neyavakatangira, iyo Snapdragon 70. Iyo Snapdragon 675G uye iyo 720G, kune rumwe rutivi, vari kutarisirwa kuratidzira nekukurumidza AI kuita nekuda kwavo 730-mfululizo nomenclature , asi misiyano chaiyo muAI Injini yekuvakira pakati pematatu matatu haina kujeka ikozvino.
Iyo Spectra 355L inoumbwa ne14-bit ISPs mu Snapdragon 690, ichiunza 4K HDR vhidhiyo kubatwa neiyo portrait mode (bokeh), imwe yekutanga yeiyo Snapdragon 6-mfululizo. Anopfuura bhiriyoni emavara (1.08 bhiriyoni) anogona ikozvino kubatwa muvhidhiyo neiyi ISP. Inotsigira anosvika 192MP kamera, uye inosvika 48MP ine yakawanda-furemu ruzha kuderedza (MFNR). Panyaya yekuseta kamera mbiri, inotsigira inosvika 32MP + 16MP pa30fps ine ZSL. Anotapira-anonamira kubatwa anotsigirwa kusvika kusvika pa1080p pa 240fps. Mafomu ekubata evhidhiyo ari HDR10 uye HLG zvichiteerana. Iyo ISP inotsigira iyo HEIF uye HEVC mafomu anoshanda kutema pasi pane saizi faira.
Kubatana: Snapdragon X51 5G Modem-RF system
Iyo Snapdragon 690 inoratidzira Qualcomm's Snapdragon X51 5G modem-RF system, iyo yakabatanidzwa pamwe nayo (panzvimbo yekuve iri disset system senge iyo Snapdragon X55. Iyi inotsvedza pazasi iyo Snapdragon 865's Snapdragon X55 modem-RF system pamwe neye Snapdragon 765's Snapdragon X52 modem-RF system. Iyo Snapdragon X51 ndiyo modem-to-antenna system yakasanganiswa ye multimode 5G. Iyo inotsigira ese asiri maviri anomira (NSA) uye anomira (SA) modes ye5G, aine zvese FDD uye TDD rutsigiro, pamwe neDynamic Spectrum Sharing (DSS).
Sezvatinotarisirwa, iyo system inoisa sub-6GHz 5G uye haitsigire iyo inodhura mmWave 5G (iyo ndeyekushandisa zvakanyanyisa ikozvino, ine musika inowanikwa zvishoma pamusika). Iyo Snapdragon X51 ine 100MHz yebandwidth ye sub-6GHz 5G ine 4 × 4 MIMO. Iyo inotsigira yepasi rese 5G ine akawanda-SIM mashandiro. Iyo 5G downlink inokwira kusvika pa2.5Gbps, nepo LTE downlink iri kumusoro kwe1.2GGbps. Iko kumhanya kwekumusoro kwe5G uye 4G ndeye 660Mbps uye 210Mbps zvakateerana. Dzemhanya idzi dzese dzinofungidzirwa kuderera kupfuura iyo Snapdragon X52 modem-RF system inowanikwa mune yakakwira-kumagumo Snapdragon 765.
Iyo Snapdragon X51 modem-RF system ndeyemasikirwo system multimode, zvinoreva kuti inotsigira magariro ekubatanidza zviitiko zvakare. Qualcomm's proprietary technologies yakadai seQualcomm 5G PowerSave, Wideband Envelope Tracking, nezvimwe, zvakare yakaiswa mune modem-RF system.
Wi-Fi uye Bluetooth: Qualcomm FastConnect 6200
Iyo Qualcomm FastConnect 6200 yekubatanidza system inopa simba iyo Wi-Fi uye Bluetooth pane Snapdragon 690 (iyo zvakare inopa masimba Wi-Fi uye Bluetooth pane Snapdragon 765.) Iyo "Wi-Fi 6-yakagadzirira" chip, iyo isiri chaizvo chijeka pane izvo zvinoreva. Iyo inotsigira Wi-Fi 5 uye yakapfuura Wi-Fi zviyero. Iyo MIMO inogadziriswa ndeye 2 × 2 (2-rwizi) ine MU-MIMO, imwe yekutanga yeiyo Snapdragon 6-mfululizo. Iyo yekushandisa chiteshi ndeye 20/40/80 MHz.
Iyo FastConnect 6200 inoratidzira Bluetooth 5.1 nerutsigiro rweQualcomm's aptX Adaptive codec uye yayo yechokwadi TrueWireless.
Iyo Snapdragon 690 inotsigira Yakazara HD + inoratidzira neinosvika zviuru zana nemakumi matatu zveHz Refresh, iyo iri imwe yekutanga yeiyo Snapdragon 120-mfululizo. Yekutsigira kwekunze kwekunze kutsigirwa ndeye QHD + pa6Hz. Iyo inotsigira 60-bit mavara ekuratidzira (kwete kuti isu tichavaona mumusika wepakati wepakati musika wemakore), nerutsigiro rwevose HDR10, HDR10 +, uye futuristic Rec.10 color gamut.
Iyo Snapdragon 690 ndiyo yekutanga Snapdragon 6-mfululizo Soc kuisa rutsigiro rweIndia NAVIC GNSS system, inouya mushure meSnapdragon 720G. Inotsigira maviri-frequency GNSS uye ese makuru eGNSS masisitimu akadai seGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, uye NavIC.
Audio uye kuchaja
Iyo Snapdragon 690 inoratidza Qualcomm's Aqstic audio codec (kusvika kuWCD9385). Inotaridzawo iyo Hexagon Voice Assistant Accelerator yemahara-akurumidzisa izwi chiratidzo kugadzirisa pamwe neAqstic smart speaker amplifier (kusvika kuWSA8815).
Panyaya yemiyero yekushaja, chip yacho inotsigira Qualcomm's Kukurumidza Kuchaja 4+ kutaurwa.
Kupedzisira, iyo chip zvakare inotsigira DisplayPort kuburitsa pamusoro pe USB Type-C, kunyange zviri kumusoro kune avo vanogadzira michina kana vachida kugonesa kana kuremadza chimiro.
Qualcomm Snapdragon 690 - Kunze
Izvozvi, Qualcomm's yepazasi yepakati peS SoC portfolio inopfuura kuvhiringidza. Iyo Snapdragon 720G uye iyo 730G zvine hunyanzvi hwekupedzisira-kupera SoCs pane iyo nyowani Snapdragon 690, asi Snapdragon 690 ine hunyowani CPU yekuvaka uye inokurumidza GPU futi. Iyo yambotaurwa Snapdragon 7-yakatevedzana inogona kunge ichikurumidza AI kuita, asi iyo Snapdragon 690 inorova kumashure ne sub-6GHz 5G yekubatana. Saka Snapdragon 690 zvishandiso zvichabudirira Snapdragon 720G zvishandiso, kana zvichave zviri mune chakasiyana chigadzirwa tier? Mhinduro kune iyoyo ichiri kujeka.
Vagadziri vekutanga kushandisa chip ichi chichava HMD Global, Sharp, Wingtech, Motorola, TCL, uye LG. Nekusajeka, mazita eXiaomi neReomeme - vatengesi vaviri veChinese vheji vanogadzira nharembozha-yakakosha mari - vashaya kubva pamazita. Izvi hazvireve kuti havasi kuzotanga michina neicho chip; zvinongoreva kuti vatengesi vambotaurwa vanozove vekutanga kuishandisa, asi zvichiri zvinonakidza zvakakwana kuti vataure nezvazvo.
Mukupfupisa, Qualcomm akatiudza kuti isu tinofanirwa kutarisira kuti michina yakapihwa simba neiyo Snapdragon 690 iwanikwe mubhadharo ye $ 300 + mutengo. Nekudaro, pakanga paine rumwe ruzivo rwakapesana sekupindura mubvunzo wenhau, takaziviswa kuti mune dzimwe misika senge India, zvinoita kuti chip inogona kushandiswa mumadhora mazana mashanu nemakumi mairi nemazana maviri emadhora. Zvakare, chip yacho inorovaniswa kumafoni ekuvhura muUS futi.
Maonero eiyo Snapdragon 690 akapenya nekuti iyo chip inounza akati wandei firsts kuna Snapdragon 6-mfululizo. Panguva imwechete, zvakadaro, Qualcomm inogona kunyatsorayirwa kuti itarise kumumvuri uri kuuya weMediaTek. Iyo Helio G90T, iyo Dimensity 800 uye ikozvino iyo Dimensity 820 (kupa simba inokwanisika Redmi 10X) ratidza kuti Qualcomm iri munjodzi yekurasikirwa (uye yakatopererwa kusvika kune imwe nhanho) yayo yakareba-chinzvimbo chinzvimbo mune SoC mashandiro uye kukosha. Kune vatengi, makwikwi akavandudzwa ichi chinhu chakanaka, uye isu tinotarisira mimwe kifaa yakakura inotangisa kumberi mumwedzi iri kuuya ya2020.
Qualcomm Snapdragon 690 - Rakazara Rizere
Kuti utarise zvizere zvakatsanangurwa zveScrapdragon 690, vhura iyo yekutanga pazasi, kana shanyira webhusaiti yaQualcomm.
Qualcomm AI Injini
Qualcomm® Hexagon Vector eExtensions (HVX)
Qualcomm Inonzwa Hub
Ultra yakaderera simba hub yekuraira, inzwi uye sensors
Inotsigira AI algorithms pasimba rakaderera
Tsigiro yekufungidzira mamiriro ezvinhu data hova kusanganisira masensa, odhiyo uye izwi
Inotsigira akawanda anobatsira izwi
Multi-mic kure-kumunda kutarisa uye echo kubviswa
5G Modem-RF Sisitimu
Snapdragon X51 5G Modem-RF Sisitimu - Modem kune antenna yakasanganiswa system ye5G multimode
5G standalone (SA) uye isiri-kumira-non-standalone (NSA) modes, FDD, TDD
Dynamic Spectrum Kugovera
Sub-6 GHz: 100 MHz bandwidth, 4 × 4 MIMO
Qualcomm® Smart Transmit tekinoroji
Qualcomm Wideband Envelopu Kutsvaga
Qualcomm® Signal Boost inoshandura antenna tuning
Global 5G yakawanda-SIM
Downlink: Kusvikira pa2.5 Gbps (5G), 1.2 Gbps (LTE)
Uplink: Kusvikira pa660 Mbps (5G), 210 Mbps (LTE)
Multimode rutsigiro: 5G NR, LTE inosanganisira CBRS, WCDMA, HSPA, TD-SCDMA, CDMA 1x, EV-DO, GSM / EDGE Wi-Fi & Bluetooth
FastConnect 6200 Sisitimu
Wi-Fi Viwango: Wi-Fi 6-yakagadzirira (802.11ax tayari), 802.11ac Wave 2, 802.11a / b / g, 802.11n
Wi-Fi Spectral Bhendi: 2.4 GHz, 5 GHz
Kushandiswa kweChannel: 20/40/80 MHz
MIMO Kugadziriswa: 2 × 2 (2-rwizi) neMU-MIMO
8-kurira kurira ((8 × 8 MU-MIMO)
Kuchengetedzeka kweWi-Fi: WPA3-Enterprise, WPA3-Yakavhurika Yakavhurika, WPA3 Easy Batanidza, WPA3-Yega
Target Wake Nguva (TWT)
Bhaudi odhiyo: Qualcomm TrueWireless Technology, aptX Adaptive
Diki gumi nemana-bit ISPs
Kusvikira 192 MP snapshot kubatwa (kusvika 48 MP snapshot kubatwa neMFNR)
Kusvikira pa32 + 16 MP mbiri mbiri kamera @ 30 FPS ine Zero Shutter Lag
Rec. 2020 karaini gamut / 10-mabhatiti peruvara rwevhidhiyo kutorwa
Slow-mo vhidhiyo kubatwa pa720p @ 240 FPS
HEIF: HEIC mufananidzo wekutora, HEVC vhidhiyo kubatwa
Vhidhiyo Yekutora Mafomu: HDR10, HLG
4K HDR Vhidhiyo Capture ine Portrait Mode (Bokeh)
Multi-ifa Noise Reduction (MFNR)
Hexagon Izwi Mutevedzeri Wenyaya ye Hardware yakawedzera inzwi inzwi kugadzirisa
Qualcomm Aqstic audio codec (kusvika WCD9385)
Yese Harmonic Kuparadzanisa + Ruzha (THD + N), Kutamba: -108dB
Native DSD rutsigiro, PCM inosvika 384 kHz / 32-bit
Customizable "Goridhe Ears" faira
Qualcomm Aqstic smart speaker amplifier (kusvika WSA8815)
Maximum On-Chishandiso Display Rutsigiro:
FHD + @ 120 Hz
Maximum Kunze Kwekuratidzira Rutsigiro:
10-bit ruvara kudzika, Rec. 2020 karavara gamut
HDR10 uye HDR10 +
Kryo 560, Octa-musimboti CPU
Kusvikira ku 2.0 GHz
Vulkan ® 1.1 API rutsigiro
4K HDR10 PQ uye HLG Kutamba Kwemavhidhiyo (10 bit color color, Rec. 2020 color colorut)
H.264 (AVC), H.265 (HEVC) VP8 uye VP9 kutamba
Zvepanyama Zvinoenderana Nekupa
Tsigiro ye API: OpenGL ® ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1, DirectX 12
Biometric Kusimbiswa: Fingerprint, Iris, Izwi, Chiso
Pa-Chidimbu: Qualcomm Mobile Security Security, Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security Security
Kurumidza Kura 4+ tekinoroji
GPS, Girazi, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, uye SBAS
Dual Frequency Tsigiro
Yakadzika Simba Geofeni uye Kutevera, Sensor-yakabatsira Navigation
Pedyo neSocial Communications (NFC): Yakatsigirwa
Yekuyeuka Kumusoro: kusvika 1866 MHz, 8 GB RAM
Rudzi rweMemory: 2 x 16-bit, LPDDR4x
Pedyo neSocial Communications (NFC) tsigiro
DisplayPort pamusoro USB Type-C rutsigiro
8 nm Kugadziriswa Technology
Chikamu Nhamba: SM6350
The post Qualcomm inovhenekera iyo Snapdragon 690, yepakati-pevhu chip kuunza 5G kune masasi yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Qualcomm Inozivisa Snapdragon 660 & 630 Nhare dzeMapuratifomu: Zviri nani Kubatana, Kamera, & Komputa pa14nm
Qualcomm inozivisa iyo Snapdragon 732G uye inosimbisa kuti iri kuuya kufoni yePOCO
Pakutanga Google Pixel 4a kuita ongororo kunoenzanisa iyo 2020 yepakati-renji Pixel kune iyo Pixel 4, Pixel 3a, uye Pixel 3 XL